Medical Writings: Become pregnant ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြင်း
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၈)
ဆရာရှင့်. နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာပါ.. ကျွန်မက အသက် ၂၂ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အပျိုပါ..ကျောင်းသူပါ. ဆရာရဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဆိုတာတွေလည်း ဖတ်ပြီးပါပြီ အလွန် ဗဟုသုတ ရပါတယ်.. ကျွန်မ သိချင်တာလေး မေးပါရစေ.. ဆရာရေးထားတာက oral sex က ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ဘူးလို့ ဖတ်ရပါတယ်.. ယောက်ျားလေး သုတ်ပိုး မိန်းကလေး ကိုယ်ထဲ ၀င်မှ ကိုယ်ဝန်ရှိတာလားရှင်.. ယောက်ျာလေး အရည် နဲ့ မိန်းကလေး အင်္ဂါ ထိတွေ့မိရင်ရော. ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားရှင် ဆရာ.. ကျွန်မကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ..
ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျပြောရရင် ယောက်ျား လိင်အင်္ဂါကနေထွက်တဲ့ သုတ်ရည် နဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ မျိုးဥ တနည်းနည်းနဲ့ ထိတွေ့၊ ပေါင်းစပ်မှ ဖြစ်တာပါ။ လွယ်တယ်ဆိုလဲ ဟုတ်တယ်၊ ခက်ခဲတယ်ဆိုပြန်ရင်လဲ မှန်တယ်။ တခါတည်း ဆက်ဆံတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတတ်သလို အိမ်ထောင် ရက်သားကျတာ နှစ်တွေကြာတာတောင်မှ သားသမီး မထွန်းကားတာလဲ ရှိတယ်။
(သုတ်ရည်ဆိုတာ) လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ ယောက်ျားအင်္ဂါထိပ်မှာ စိုလာတဲ့ (စီမင်) ဆိုတဲ့အရည် မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးတွေမှာလဲ လိင်စိတ်ဖြစ်လာရင် မိန်းမအင်္ဂါမှာ စိုလာတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျား-မိန်းမ နှစ်ယောက်လုံးမှာ ဒီအရည်မျိုးက ကိုယ်ဝန် မဆောင်စေနိုင်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံရင် (လိင်အင်္ဂါ နှစ်ခု ထိစပ်ခြင်းလုပ်ရင်) အဆင်ပြေ ချောမွေ့အောင် ပြုပြင်ပေးမှုတခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံစိတ် ပြည့်ဝသွားချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့အရည်ကိုသာ သုတ်ရည်ခေါ်တယ်။ အထဲမှာ သုတ်ပိုးတွေပါတယ်။ သုတ်ပိုးတွေက ကျန်းမာသန်စွမ်းရမယ်။ အရည်အတွက်ကလဲ မနည်းရဘူး။ ဒါမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေနိုင်တယ်။ သုတ်ရည်ဆိုတာ (စီမင်)လို စိမ့်ထွက်နေတာ မဟုတ်ဘဲ၊ အရှိန်နဲ့ ပန်းထွက်လာတာပါ။
ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံတာ မလုပ်ဘဲလဲ လိင်စိတ်ပြည့်ဝသွားအောင် တခြားနည်းနဲ့လုပ်ရင် ယောက်ျားမှာ သုတ်ရည် ထွက်စေနိုင်သလို၊ မိန်းမမှာလဲ နောက်အရည်တမျိုး ထွက်စေနိုင်တယ်။ ဒါမျိုးကို တနည်းအားဖြင့် ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတယ်၊ (ကလိုင်းမက်စ်) ရောက်တယ်၊ (အော်ဂဇင်) ရတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ အရပ်စကားနဲ့ဆိုရင် “ပြီး” သွားတယ်ပေါ့။ မိန်းမတွေမှာ (အော်ဂဇင်) မရဘဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။ ယောက်ျားမှာတော့ (အော်ဂဇင်) ရလို့ သုတ်ရည် ထွက်မှသာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စေနိုင်တယ်။
လိင်ဆက်ဆံတာ မဟုတ်ဘဲလဲ (အော်ဂဇင်) ရစေနိုင်တယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လို့ခေါ်တယ်။ နည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ (အိုရယ်လ်) ပါးစပ်သုံးနည်းကလဲ တခုအပါအ၀င်ဖြစ်တယ်။ မိမိလက်နဲ့ မိမိဖါသာ သာယာမှုရအောင်လုပ်တာကို အများဆုံး လုပ်ကြတယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ မိန်းမတွေအတွက် (တွိုင်း) ခေါ် ပစ္စည်းကရိယာ အမျိုးမျိုး သုံးတာတွေ ရှိသလို ယောက်ျားတွေအတွက်လဲ တခြား (တွိုင်း) တွေ ရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစေဘို့ နောက်ထပ် လိုသေးတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ မိန်းမဟာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် အပျိုဘော်ဝင်ပြီး၊ သွေးဆုံးချိန် မတိုင်ခင်ဖြစ်ရမယ်။ လစဉ်ရာသီ လာနေသူ ဖြစ်ရမယ်။ ရာသီလာရက် နှစ်ခါအကြား လအလည်ရက်မှာ မျိုးဥအိမ် (အိုဗရီ) ကနေ မျိုးဥ (အိုဗမ်) ထွက်ရမယ်။ နောက် သူနဲ့ဆက်ဆံသူ ယောက်ျားကလဲ လူပျိုဖြစ်ပြီးသူဖြစ်ရမယ်။ ကျား-မ ကွာတာတချက်ကတော့ ယောက်ျားတွေမှာ အမျိုးသမီးများလို သွေးဆုံး-သားဆုံးဆိုတာ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။
အဲလို အရည်အချင်းတွေပြည့်သူ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက် လိင်ဆက်ဆံကြမယ်။ အတိအကျ ပြောရရင် လိင်အင်္ဂါ နှစ်ခု ထိစပ်မှုကို အချိန် အတိုင်းအတာတခုထိ လုပ်မယ်။ ယောက်ျား အပြီးသတ်ချိန် (လိင်စိတ် ပြည့်ဝချိန်၊ ကလိုင်းမက်စ် ရောက်ချိန်၊) မှာ ကျားလိင်အင်္ဂါက မမွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနာ) ထဲမှာ ထားနေတုံး သုတ်လွှတ်ရမယ်။ မိန်းကလေးက ဆန္ဒပြည့်ဝချင်မှ ပြည့်ဝသွားပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်တယ်။
ဘယ်ရက်မှာဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံရင် ယောက်ျားဖြစ်သူက စိတ်ဆန္ဒပြည့်လို့ သုတ်ရည်ထွက်ချိန်မှာ မိန်းကလေးရဲ့ မွေးလမ်းအင်္ဂါအပြင်မှာ သုတ်ရည်ကို ထုတ်လွှတ်ရင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်စေနိုင်ပါ။ အတိအကျ ဖြစ်အောင် လုပ်ဘို့တော့ လိုတာပေါ့။ သေခြာအောင် ရေးရရင် ယောက်ျားလေးဟာ လိင်ဆက်ဆံနေတုံး အချိန် ကြာစေချင်တာကြောင့် သုတ်ရည် မထွက်သေးအောင် စိတ်ကိုထိန်းမယ်။ ထိန်းနိုင်အုံးတော့ ၁ စက်လောက် တွက်သွားရင် ၁ စက်ထဲမှာ သုတ်ပိုး အရည်အတွက် သိန်းနဲ့ချီပါတာမို့ ကိုယ်ဝန်ရစေနိုင်တယ်။ (ကွန်ဒွန်)သုံးရင်တော့ သုတ်ရည်အားလုံး မိန်းမကိုယ်ထဲ မ၀င်လို့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ယောက်ျားလေးအရည် နဲ့ မိန်းကလေးအင်္ဂါ ထိတွေ့မိရင်ရော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား။” အရည်ဟာ သုတ်ရည်ဖြစ်ရမယ်၊ သုတ်ရည်ဖြစ်အုံးတော့ မိန်းကလေးအင်္ဂါနဲ့ ထိတွေ့မိယုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်မရသေးပါ။ အထဲကို ၀င်ရပါမယ်။ အထဲဆိုတာ (ဗဂျိုင်းနား) အတွင်း၊ အတွင်းဆိုတာတောင်မှ အထဲရောက်လေလေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လေ ဖြစ်တယ်။
(ဗဂျိုင်းနား) အဆုံးမှာ အထက်ကရှိနေတာက သားအိမ်အ၀ဖြစ်တယ်။ သားအိမ်အ၀ဆိုတာ စေ့ထားတဲ့ပါးစပ်လိုနေတာ။ အဲဒီအထဲကို သုတ်ရည်ထဲက သုတ်ပိုးတွေ ၀င်သွားမယ်။ သုတ်ရည်ဟာ တခြားအရည်မျိုးလို မဟုတ်ဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုအား ရှိတယ်။ သူသွားရမဲ့လမ်း သူသိသလိုဘဲ။ သာမန်အရည်ဆိုတာမျိုးက (ဂရယ်ဗတီ) ကမ္ဘာ့ဆွဲအားအရ စီးဆင်းတာ။ သုတ်ရည်ကြတော့ သံလိုက်သဘောမျိုး ဖိုဓါတ်-မဓါတ် ဆွဲဆောင်မှုအရ တခုကနေ တခုဆီ သွားပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ သုတ်ပိုးကို ဆွဲဆောင်နေတာက သားအိမ်အပေါ်ပိုင်းနားက မျိုးဥအိမ်ကနေထွက်ထားတဲ့ မျိုးဥဖြစ်တယ်။ သူတို့နှစ်မျိုး သားအိမ်မှာ ဖူးဇာဆုံတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်။
သတိထားဘို့ တချက်က ယောက်ျားသုတ်ရည်ဟာ လိင်ဆက်ဆံတာ မဟုတ်ဘဲ မိန်းကလေးရဲ့ (ဗဂျိုင်းနား) အတွင်းကို တနည်းနည်းနဲ့ ၀င်ရင်လဲ ကိုယ်ဝန်ရစေနိုင်တယ်။ သဘာဝမဟုတ်နည်းနဲ့ ကလေးရအောင်လုပ်ယူတာက ဒီနည်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တနှစ်မှာ တခါသာပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းလို၊ မ-မျိုးဥဟာ တလ မှာ ၁ ကြိမ်သာထွက်တယ်။ သုတ်ပိုးရော မ-မျိုးဥရောဟာ ရက် နည်းနည်း ရှင်နေနိုင်တယ်။ မ-မျိုးဥ မထွက်ခင် ရောက်နေပြီးသား ကျားသုတ်ပိုး၊ ကျားသုတ်ပိုး ၀င်မလာခင် ထွက်ထားပြီး မ-မျိုးဥတို့ တွေ့ဆုံ၊ ပေါင်းစပ်လို့လဲ ကိုယ်ဝန်ရစေနိုင်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးက ရာသီလာပြီး ၁ ပါတ်(၇ ရက်) နဲ့ မလာခင် ၁ ပါတ်(၇ ရက်) ဆိုတဲ့ ၁၄ ရက်အတွင်း ယောက်ျားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့ အခွင့်အလမ်း နည်းပါတယ်။ ကျန် ၂ ပါတ်မှာ ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန် ရတတ်တယ်။ ပိတောက်ပန်းများလဲ မညှိုးမချင်း မွှေးလွန်းကြတယ် မဟုတ်ပါလား။
Posted by Dr. Tint Swe at 10:45 PM